Inkqubo yokuThengisa isixhobo seCopper Wire
Injongo yolu vavanyo lwesicelo kukufumana ixesha lokufudumeza lokunxibelelana kocingo lobhedu kwi-cable coaxial cable. Umthengi angathanda ukubuyisela into eyenziwe ngesandla kunye nezinto ezenziwe ngombane, ngokwenza into yokuthengisa ngaphakathi. Ukuthengiswa kwezandla kunokusebenza nzima, kwaye umthengisi odibeneyo uxhomekeke kakhulu kubuchule bomqhubi. Ukungenisa izinto ivumela ulawulo lweenkqubo ezigqityiweyo, kwaye inike iziphumo ezingaguqukiyo.
I-DW-UHF-6KW-III i-handuction ye-induction yokubamba ngesandla
• Intambo yomnatha oqobayo
Iziqhagamsheli zebhedu eziplated
• Isidibanisi sangaphakathi esine-Copper esime umlo
• Isidibanisi sangaphakathi esine-khonkco
• I-Solder wire
• Intsimbi yekhabhoni
Uvavanyo 1: Ukuthengisa iCopper Coax Centre Conductor kwiBullet-Shape Center Pin
Ubushushu: ~ 400 ° F (204 ° C)
Amandla: 1.32 kW
Ixesha: Imizuzwana emi-3 yokuxhumaxhuma kobungqina
Uvavanyo lwesi-2: Ukuqhuba kweCopper Coax kwiziko eliqhuba iSitena
Ixesha: i-1.5 yesibini kwisikhonkwane senaliti
Uvavanyo 3: Ukuthengisa iCopper Coax ukuya kwiSixeko sokuGqibela (iPine yeXabiso le-Bullet-Shape)
Amandla: 1.8 kW
Ixesha: imizuzwana engama-30 yexesha lokufudumeza, lilandelwe ngumjikelo wokuphola wesibini we-10
Uvavanyo lwe-4: Ukuthengisa iCopper Coax kwiSixeko sokuGcina (iPine yeXabiso leNaliti)
Kuhlobo ngalunye lwesikhonkwane seziko, inkqubo yokuthengisa inamanyathelo amabini. Okokuqala, ukuthengisa isikhonkwane embindini (okumile-bullet okanye imbobo yenaliti) kumqhubi wesembambo wentambo edibeneyo; kwaye okwesibini, ukuthengiswa kwentambo ehlanganisiweyo kunye nephini kuqhagamshelo lokugqibela
Uvavanyo loku-1 nolwesi-2: Ukuthengisa iziko eliphambili lobhedu kwiziko eliphini
Isikhonkwane sokudibanisa sangaphakathi (inaliti kunye nebhulethini elandelwa yinkqubo efanayo) zadityaniswa kumqhubi wecandelo coaxial cable Centre. Umthengisi we-slug ukongeza ½ ubude bepini apho kuya kuthengiswa khona ucingo, lwalusikiwe lwaze lwabekwa esiphelweni sokufumana isikhonkwane. Umqhubi wobhedu wecoa ubekwe ekuphumleni komthengisi we-slg kwipini ngoxinzelelo lokukhanya ezantsi.
Indibano yafakwa kwi-coil yecala elingena kabini, kwaye amandla acinyiwe.
Njengoko umthengisi wanyibilika, umqhubi wobhedu wecoax wayehleli kwizikhonkwane. Indibano yayiqhutywa eminye imizuzwana eliqela xa uthengisayo upholileyo. Qaphela: kubalulekile ukugcina umthengisi odityanisiweyo ude ube upholile. Ukuba intshukumo yenzeka, indibaniselwano “ebandayo” yomthengisi inokuba nesiphumo.
Uvavanyo lwe-3 kunye no-4: Ukudibanisa isixhobo sokuxhuma sobhedu-uhlobo lwesiphelo
Ucingo oluxovuliweyo lwalunenxeba lokujikeleza imibhobho eyenziwe ngumbala wengca. I-coax ene-solder ibekwe kwisiphelo sokudibanisa.
Indibano yafakwa kwi-coil yangaphakathi ebunjiweyo, kunye namandla axhanyulwayo.
Ixesha lokufudumeza - imizuzwana engama-30 kuyo nayiphi na indibano elandelwa kukubanjwa kwesibini kwe-10 ukuvumela ialloy ukuba iqinelane.
Ukuthengisa izinto kuyaphumelela, kwaye kuqinisekisile ukuba indibaniselwano yocingo lwendibaniselwano ye-induction yeyona ndlela ibhetele yokuthengisa ngesandla.
iindidi Teknoloji tags Uluhlu oluphezulu lwefowuni, iziqhagamshelo zentengiso zokuthengisa, umshini wokucoca, zethusi, ucingo olubhedu olubengezelayo, Ukudibanisa izihlanganisi zeCopper Wire, iingcingo zobhedu ezihlanganisiweyo, induction yokuthengisa Post yokukhangela